Warren Buffett သည် Bitcoin ကိုစိတ်ဝင်စားသည့် Nubank တွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ | BitcoinEthereumNews.com
Warren Buffett သည် Bitcoin ကိုစိတ်ဝင်စားသည့် Nubank တွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
Warren Buffett ကအားဖြင့် သူ၏ Berkshire Hathaway သည်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည် ဘရာဇီးဒီဂျစ်တယ်ဘဏ်၌တည်၏ Bitcoin ETF များကိုကမ်းလှမ်းရန်စိတ်ဝင်စားသော Nubank.
ဘတ်ဖတ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည် သတင်းများအရ ဇန်နဝါရီလတွင်ကြေငြာခဲ့သည် fintech ၏ဒေါ်လာ ၄၀၀ မီတာစီးရီး G ပတ်ပတ်လည်ကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။ ဤအတောအတွင်း Berkshire Hathaway တွင်ဘရာဇီးလ်ရှိ DigitalCo ကုမ္ပဏီမှငွေပေးငွေယူကုမ္ပဏီလည်းရှိသည်။
Nubank လည်းရှိလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့ကြပုံရသည် $ 250 သန်းစုစုပေါင်းဒုတိယရန်ပုံငွေရှာ extension ကို။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနောက်ကွယ်မှာ Sands Capital, Invest, Sunley House Capital, CPP Investments, MSA Capital, Tarsadia Capital နှင့်တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Tencent စတဲ့နာမည်ကြီးနာမည်များရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးတိုးချဲ့မှုအားလုံးနှင့်အတူပြောနိုင်ပါတယ်။ လက်တင်အမေရိကရှိနည်းပညာကုမ္ပဏီမှအများဆုံးရရှိသည့်ဒေါ်လာ ၁.၁၅ ဘီလီယံကို Nubank ကရရှိခဲ့သည်.
Challenger Bank ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် David Vélezကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Cristina Junqueira နှင့် Edward Wible တို့နှင့်ဆော်ပေါ်လိုတွင်အခြေစိုက်သည်။
ဤ ဘတ်ဖတ်ထံမှရန်ပုံငွေ ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုတီထွင်ပါထိုကဲ့သို့သောအခကြေးငွေ - အခမဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်, အကြွေးနှင့် Easynvest မှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Nubank မှဝယ်ယူလိုက်သော fintech တစ်ခု။
Warren Buffett, Nubank နှင့် Bitcoin: ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိလဲ။
ယခုအချိန်တွင်ဘတ်ဖတ်နှင့်အခြားသူများကရွေးချယ်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ်သည်ပြီးခဲ့သည့်လက Bitcoin ၏မိဖုရားကိုစိတ်ဝင်စားမှုအချို့အတွက်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိပါသည် ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများကို သောဘဏ် Bitcoin သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြရန်သတ်မှတ်ထားသည်သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းက FinTech ဂေဟစနစ်ကိုမည်မျှပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့, Nubank နှင့် Bitcoin အကြားလက်ရှိဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနေသည် ဘရာဇီးလ်ဒီဂျစ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Easynvest မှတစ်ဆင့်။ တကယ်တော့နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ 2020, Nubank ဝယ်ယူ ဤမေလ 2021 ၏အဖြစ်ဖြစ်သော Easynvest ပူဇော်သက္ကာကို QR Bitcoin ETF (QBTC11)).
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ Easynvest သည် Bitcoin ကိုမည်သို့ဖော်ပြသနည်း။
“ Bitcoin ဟာလူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းမှာရှိနေတယ်။ Virtual ငွေကြေးသည်စာနယ်ဇင်းများတွင်များပြားလှသောသတင်းပုံပြင်များ၏အကြောင်းအရာဖြစ်လာသည်။ Elon Musk နှင့် Ray Dalio တို့ကဲ့သို့ဘီလျံနာများပင်ဤပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အမြန်ရှာဖွေရန်လုံလောက်သည် သို့သော် cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းသစ်များရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ကျနော်တို့က Bitcoin ETFs အကြောင်းပြောနေတာပဲ။
ထို့ကြောင့် Nubank နှင့် Bitcoin အကြားဆက်သွယ်မှုရှိပြီး Warren Buffett နှင့် BTC တို့အကြားလည်းဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကဖြစ်ခဲ့သည် အစီရင်ခံတင်ပြ ထို ဘတ်ဖတ်သည် blockchain နှင့် bitcoin ကမ္ဘာမှထွက်ခွာခဲ့သည်.
ဤအတူ Berkshire Hathaway တွင် Nubank နှင့် Easynvest ပါ ၀ င်မှုအားဖြင့်ဘတ်ဖတ်သည် crypto ဈေးကွက်တွင်“ အသစ်ဝင်ရောက်လာသောသူ” တစ် ဦး အနေဖြင့်သူ့ကိုယ်သူခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
ရင်းမြစ် - https://en.cryptonomist.ch/2021/06/10/warren-buffett-invests-nubank-bitcoin/
Tags: Bitcoin, Buffett, စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, သန်း, nubank, Warren
S&P 500 သည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအသစ်ကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြီးနောက်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေတွင်ရှိသည်
ဤနေရာတွင် The New Elden Ring Gameplay Trailer ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ